【USanshe】Ungakwazi ukupheka/ungakwazi ukurenta inyanga nenyanga/ikhonsoli yomdlalo/kufuphi nesikhululo sikaloliwe esingaphantsi/kufuphi neYunivesithi yaseHarbin yezoRhwebo/Imarike yasebusuku yeDyunivesithi yeSiqhelo/iHarbin Institute of Technology/Umzali-umntwana adlale kwaye apheke amagumbi amabini okulala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu悦
U悦 unezimvo eziyi-174 zezinye iindawo.
U悦 ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Amanqaku aphambili: Kufuphi neYunivesithi yoRhwebo, malunga nemizuzu emi-5 yokuhamba, kufutshane neSibhedlele esiPhakathi, kunye nokuhamba ngokulula. Isithuthi sikulungele kufuphi, kwaye kulula ukuhamba. Indlu yenzelwe kakuhle kwaye ilula kwisitayela. Ikhonsoli yomdlalo ibekwe endlwini ukuququzelela uhambo losapho kunye nentsebenziswano yomzali nomntwana
Iimpawu zendawo yendlu: Indlu yam ikwi [Tongda Jiayuan Community], inamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlala elinye, igumbi lokuhlala elikhulu, elifudumeleyo kwaye likhululekile.
[Igumbi lokulala elifudumeleyo nelitofotofo] Igumbi elikhulu lokulala elikhulu, i-1.8 yeemitha eyongezelelweyo ibhedi enkulu ephindwe kabini, igumbi lokulala lesibini elinebhedi ephindwe kabini ye-1.8 yeemitha, igumbi ngalinye lokulala lixhotyiswe ngokufudumala, ukuhlangabezana neemfuno zendawo yokuhlala yabantu abaninzi, indawo yokulala ikhululekile kwaye ishushu. , ndiyathemba ukuba ubuthongo obutofotofo.
【Indlu yangasese】Isomisi seenwele, umatshini wokuhlamba impahla, isicoci sempahla, njl.njl. zilungiselelwe wena. Ishampoo, isepha yokuhlambela, iitawuli, iitawuli zokuhlambela, kunye nezinto zangasese zonke zilungiselelwe wena ngokomgangatho, nceda uqiniseke ukuba uyayisebenzisa, akukho mfuneko yokuzisa eyakho.
[Sibonelela simahla] Umatshini wokuvasa ozenzekelayo ngokupheleleyo, isifudumezi-manzi sombane, isifudumezisi segumbi lokuhlambela, ibhafu yeeyure ezingama-24, iitawuli zomgangatho ophezulu, iitawuli zokuhlambela, iziliphu zokuhlambela, iibhrashi zamazinyo ezilahlwayo, isepha yesandla, izixhoma, izomisi zeenwele, ijeli yeshawa, ishampu. kunye conditioner [Sanitation] Room "" omnye, omnye utshintsho "lonke ixesha ukuhlolwa lundwendwe ngaphandle, ndiya kucela inkwenkwezi [umakazi professional] ukutshintsha iimakhishithi, iingubo ezimfuma, kunye iitawuli. baya ngokuqinisekileyo endaweni iintsholongwane ukuqinisekisa ucoceko kunye nokucoceka kwegumbi.
Uluntu oluvalwe ngokupheleleyo
Umbuki zindwendwe ngu- 悦
Nceda abaqeshi basombulule iingxaki ngexesha lokuhlala
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R74996
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Harbin